Liiska Fursadaha Fiidiyowga si loo Caawiyo, Fix & Hagaajiyo World Planet Earth
You are here: Home / Liiska Fursadaha Fiidiyowga si loo Caawiyo, Fix & Hagaajiyo World Planet Earth
9 items 1 raacsan 0 votes 1.15k views
Ku qor liiska Roger Pilon
Dhammaan fiidiyowyada waxaa soo uruuriyay Qorshaha Fikradda ah ee Qorshaha!
Sheekada Trifilm: Q-Daboolka
Q-Drum dib-u-soo-celi gawaarida adoo ku daraya biyo si loo xalliyo dhibaatada gaadiidka biyaha saboolka aduunka. Tilmaamaha / Produced by Aaron Straight, Producer - Kim Lawrence, DP - Ian Jay, DPII - Guido Ronge, Waxaa qoray Edward Lippold / Doug Lyons / Todd Mueller, Wax soo saaraha Fulinta-Mark Dickison, Muusikada David Schommer.
Ka foojignow Emoji
Tani waa "Indha-indheynta Sanjiga" by Ani Vallabhaneni oo ku taal Vimeo, oo ah guri loogu talagalay fiidiyowyo tayo sare leh iyo dadka jecel.
Isticmaalka Barn Owls iyo Kestrels sida Agaasimaha Xakameynta Bayoolajiyada
Isticmaalka Barn Owls iyo Kestrels sida wakiilada xakameynta bayoolinka ee Israel - Jaamacadda Tel Aviv
Nano Ganesh Development Development Village
Nano Ganesh Waxaa aasaasay Santosh Ostwal, CEO Rajashree Ostwal, Agaasimaha Ago Automation Pvt. Ltd. (2010) hore ...
Siyaasadda xun ee federaaliga ah iyo xoojinta duufaannada ayaa dhaqaya dhulalka madow ee hodanka ah ee ku yaala Midwest taas oo waddankan ka dhigtay awood beeraha ah oo ah aasaaska aasaasiga ah ee nidaam caafimaad oo caafimaad leh oo joogto ah mustaqbalka.
'Ninkii Manjeeray Jannadii' Desert '
Abaalmarinta abaalmarinta filimka caalamiga ah ee 7, Man Man who stopped the Desert waa hal saacadood oo muqaal ah oo ku saabsan sheekada Yacouba Sawadogo, oo ah beeraley farmaajo ah oo Afrikaan ah oo horey u ahaa farsamo ka soo horjeeda geeddi-socodka nabadda. Waxaa sameeyey Mark Dodd, 1080 Films.
WAXYAABAHA KA DIB MARKII LOOGU TALAGALAY DALKA http://www.facebook.com/seedsofdeath Marka la diyaariyo martigelinta March ee Monsanto, waxaa lagugu martiqaadayaa inaad daawato nooca Seeds of Death of documentary abaalmarin ah. http://www.march-against-monsanto.com/ Hoggaamiyeyaasha Beeraha Big - Monsanto, DuPont, Syngenta - ayaa lagu go'aamiyey in dadka adduunku ay ka garteen khataraha caafimaadka iyo halista deegaanka ee dalagyada beeraha iyo beeraha warshadaha.
Bandhigga fiidiyowga - Mine Gold ee Qashinka Kaarboorka
Farouk Tedjar & Jean-Claude Foudraz - Habka loogu talagalay dib u warshadeeynta batariyada
Billions of batteriyada dib-u-cusbooneysiin leh ayaa la soo saaraa sannad kasta si ay u awoodaan taleefannada gacanta, laptops iyo MP3. Kala saariddu waxay ku dari kartaa qashin badan oo qashin ah.